6061 Aluminium 3in x 5in Rosin efere Nịm na heaters njikwa Nrụgide oru Rosin Press gaa sọrọ njikwa katrij heaters - China Dongguan Amon Hardware
Nga Press ebu
Enail ngwa iwu
Vape Pen / katrij
6061 Aluminium 3in x 5in Rosin efere Nịm na heaters njikwa Nrụgide oru Rosin Press gaa sọrọ njikwa katrij heaters
The nnukwu nsogbu na ịpị rosin bụ ndị na-eri ngwá. Ọ bụrụ na gị na njikere afanyekwa si obere ichekwa resin eji a ntutu straightener, gị na-aga na-eji a ole na ole ebu. Ahụwo m ọtụtụ nnukwu ígwè ọrụ na-aga n'ihi ọtụtụ puku dollar, ma okodu na ọtụtụ wouldn`t ka ihe ezi uche ma ọ bụrụ na gị na-agba ọsọ a azụmahịa.
Ọ bụrụ na gị na ndị nwere mmasị na-amị ezi rosin na oké mkpụrụ gị aga dị mkpa ihe abụọ:
Mgbe Ịga rosin, obere okpomọkụ dị mkpa na elu nrụgide, nke pụtara na ị nwere ike fọrọ nke nta ka oyi pịa rosin, ma ọ bụrụ na ị nwere ikike ngwá. Ma, na-ahapụ rapara script ebe a. I`m banyere na-egosi gị otú ị pụrụ ime ka gị onwe gị na N'onwe Rosin Press na-erughị $ 500.
WTF nri, a pịa na ike efere si 12,000lb nrụgide na okpomọkụ njikwa nke kasị zaa! Best niile, ọ na-ewe a di na nwunye nke nkeji na melite na-eji.
Let`s-eche ihu ya, na ịpị Rosin bụ ụzọ kasị mma na afanyekwa niile juices si afọ. Site na iji okpomọkụ na mgbali wepụ resin si ogwu (osisi okwu), na onye ọ bụla pụrụ ịba ụfọdụ elu àgwà resin.
The nnukwu nsogbu na ịpị rosin bụ ndị na-eri ngwá. Ọ bụrụ na gị na njikere afanyekwa si obere ichekwa resin eji a ntutu straightener , gị na-aga na-eji a ole na ole ebu. Ahụwo m ọtụtụ nnukwu ígwè ọrụ na-aga n'ihi ọtụtụ puku dollar, ma okodu na ọtụtụ wouldn`t ka ihe ezi uche ma ọ bụrụ na gị na-agba ọsọ a azụmahịa.
Elu nsogbu - dịkarịa ala 500lb ka 1,000lb (2+ tọn họọrọ)
Okpomọkụ - 150 ° F na 350 ° F (200 ° F họọrọ)
Mgbe Ịga rosin, obere okpomọkụ dị mkpa na elu nrụgide, nke pụtara na ị nwere ike fọrọ nke nta ka oyi pịa rosin, ma ọ bụrụ na ị nwere ikike ngwá. Ma, na-ahapụ rapara script ebe a. I`m banyere na-egosi gị how you can make your own DIY Rosin Press for less than $500.
N'onwe Rosin rig
Iwu rig niile ị chọrọ bụ abụọ dị mfe ngwaahịa:
Ugboro abụọ Rosin Press efere Kit Nrụgide oru Dual njikwa Igbe na Wired Heating Rod
6-ton Hydraulic Shop Ft Press na Press efere na H ụba
Ọ bụrụ na gị na-zuru ujo ma, na-ahapụ gafee nkọwa ma. Ọzọkwa kasị mma usoro maka tupu ịpị rosin kuki maka elu terpenoid zaa.
A ike isii ton pịa-chọpụtara na a siri ike H-eku. Super ike na mfe mwube WTF mfe ka. The n'akụkụ rails nwere oghere na-ekwe ka ị na-agbanwe na-arụ ọrụ ohere. Ọ na-agụnye 2 pịa efere, na-eji ha! Ha ga na-echebe gị kpo oku efere. Na ngụkọta nke ịdị arọ nke 60lb, ị nwere ike n'enweghị crank si 6 tọn nsogbu, ụzọ karịa ị ga-mkpa.
Okpomọkụ na-achịkwa Press efere
0 ° F na 415 ° F na nkeji !, ndị a oké ọrụ efere nwere ike n'ịwa ọzọ na-ezuru okpomọkụ na idi ruo 8000psi. Best niile, efere na-ewe iwe ka nri okpomọkụ na otu kọmputa akara igbe! Ị don`t nwere jerk gburugburu na esi efere, ma ọ bụ iji a igbu ọwa dị ka ụfọdụ ndị ọzọ presses.
Ọ bụrụ na ị mgbe enwe rosin n'ihu, ị ga-enwe a mara ezigbo mma echiche nke ihe na-eme ma otú mfe a bụ iji. Iwuli gị onwe gị na pịa ga-azọpụta gị a ton nke ego na-arụ ọrụ dị ka nke ọma ma ọ bụrụ na ọ bụghị mma karịa ndị ọzọ na ígwè obibi na-okpukpu abụọ nke price.
1.Plug na-egwu 5 "X3" platen guzobere. Anyị na-eji 6061 aluminum n'ihi na ọ bụ ìhè, ike, na nwere magburu onwe okpomọkụ nyefe, na-eme adịghị na-ekpo ọkụ tụrụ!
2.Dual kpụ ọkụ n'ọnụ efere, ma na-ekere òkè a otu okpomọkụ zone.This bụ a nwara, nwalee ya, ma pụtara imewe na magburu onwe ya pụta na narị ufodu. Anyị na-na-anwale ma ọtụtụ, na ọ dịghị mma mkpụrụ ma ọ bụ àgwà na sọrọ njikwa.
3.Fully ezi okpomọkụ nlekota si 0-300F comfortably. Anyị okpomọkụ ihe mmetụta u kpọmkwem n'ime efere, na-enye gị kpọmkwem ezi platen okpomọkụ.
5.Made dabara ọ bụla haịdrọlik pịa ruo 20 tọn na a 2 "n'obosara ebule ma ọ bụ obere.
Arịọnụ anyị efere gị pịa nke oke bụ dị mfe dị ka tightening abụọ set kposara (hex igodo gụnyere) na na ebule. Mbido-ewe obere karịa 5 nkeji!
6.Reach gị chọrọ okpomọkụ na erughị 10 nkeji na anyị dị ike 500w katrij kpo oku ọcha.
7.The efere nwere ike ịkwụ ụgwọ onwe ha n'ime akpa awa ole na ole nke ojiji!
Nke a gaa na-agụnye:
2pcs 6061 Aluminium nkanka
Digital njikwa wired abụọ 500w katrij kpo oku ọcha
Hex isi efego gị efere gị pịa nke oke
Otu Year Full Akwụkwọ ikike na gị na ngwá electronic
Okwu: nkwakọba, Los Angeles nkwakọba, + 3731B San Gabriel River Park ụzọ, Pico Rivera, Azu 90660, USA
6061 Aluminium 3in x 5in Rosin efere Nịm ...